Iindaba -Imisebenzi emine esisiseko yevili lesithuthuthu
Imisebenzi emine esisiseko yevili lesithuthuthu
1. Xhasa ubunzima kunye nomthwalo womzimba wemoto:
Xhasa ubunzima bomzimba wemoto, abasebenzi, imithwalo, njl.
2 Ukudluliselwa kwamandla okuqhuba kunye namandla okuqhobosha:
Ukwenza imoto iqhubele phambili okanye imise, kubalulekile ukuhambisa amandla e-injini kunye nokuqhekeza kumphezulu wendlela. Oku ikakhulu kungenxa yokuxubana kwirabha yevili. Xa umda wevili ungaphezulu komda wokuqalisa ngokukhawuleza okanye ukubamba iziqhoboshi ngokungxamisekileyo, kulula ukubangela ukungasebenzi kunye nokubaleka emotweni, okuyingozi kakhulu.
3 Guqula kwaye ugcine ulwalathiso lwemoto:
Phantsi kolawulo lwe knight, imoto iyajika okanye iqhubeke ngqo kwicala elifunayo. Lo msebenzi uphunyezwa ikakhulu ngokuxubana kunye nokuqina kwirabha yevili kunye nokuqina kwesakhiwo setayara. Xa isantya sokujika sidlula kumda wetayara, kuya kuba nzima ukuhamba kwicala elifunekayo, eliyingozi kakhulu. Ke ngoko, nceda nikela ingqalelo ekukhweleni isantya seMoto.
Ukunciphisa ifuthe elisendleleni:
Le yinto ebizwa ngokuba "kukuqhuba ukuthuthuzela", enokuthi inciphise amaqhuma abangelwa yindlela engxamisekileyo. Lo msebenzi ubukhulu becala usebenzisa ivolumu yomoya kunye noxinzelelo kwivili, ukuthamba kwirabha kunye nokuqina kwesakhiwo setayara. Ke ngoko, uxinzelelo lwamavili alunakuba phezulu kakhulu okanye lube sezantsi kakhulu. Nceda uligcine kuxinzelelo olululo lwevili.
Umxube weKhonkrithi yase China, DB Ivili, Isondo le-China PU, I-China i-PU Foam Isondo, Eziphathekayo Umxhubi Iinkuphelostencils, Ivili likaCaster,